Dropbox 158.2.2 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 158.2.2 လြန္ခဲ့ေသာ3ရက္က
Application မ်ား မီဒီယာ & ဗြီဒီယို Dropbox
Dropbox ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
We’d love to hear from you! Join the Dropbox community: https:www.dropboxforum.com
Terms of Service: https:www.dropbox.comterms
Dropbox ကိုအားလုံးသင့်ရဲ့အလုပ်များအတွက်မူလနေရာဖြစ်သည်။ သငျသညျကိုသိုလှောင်ထားနှင့်ဖိုင်များမျှဝေစီမံကိန်းများအပေါ်ပူးပေါင်း, အသက်ကိုရတတ်မှသင့်အတွက်အကောင်းဆုံးအကြံဥာဏ်များကိုရောက်စေနိုင်ပါတယ်။ သင်တစ်ဦးတည်းအလုပ်လုပ်ကိုင်သို့မဟုတ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်နေရှိမရှိအားလုံး။
•မည်သည့် device မှ Store နဲ့လက်လှမ်းဖိုင်တွေ
•မည်သူမဆိုအတူဝေမျှမယ်ဖိုင်များ, သူတို့တစ်တွေ Dropbox အကောင့်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးလျှင်ပင်
• shared files တွေကိုအပေါ်ကို real-time updates များကိုရယူလိုက်ပါ။ သငျသညျအချိန်မရွေးတစ်စုံတစ်ဦးကတစ်ဦးအပြောင်းအလဲစေသည်မှတ်ချက်အရွက်, သို့မဟုတ်သင့်အလုပ်လှုံ့ဆျောသိကြပါလိမ့်မယ်။
• doc ကင်နာနှင့်အတူ PDF များသို့လက်ခံဖြတ်ပိုင်းများ, Whiteboard များနှင့်မှတ်စုများ Turn
တစ်ဦးကို Dropbox Plus အားအခမဲ့အစမ်းဘို့ယခုမှတ်ပုံတင်မယ်။ သငျသညျသိုလှောင်မှု-သောသူအပေါင်းတို့သည်သင်၏ချိတ်ဆက်ထားသော device များဖိုင်များကိုကယ်ဖို့လုံလောကျတဲ့အခန်းရဲ့2တီဘီ (2000 GB အထိ) ရပါလိမ့်မယ်။ Dropbox ကို Smart Sync နည်းပညာသင့် hard drive ကိုပိတ်ထားခြင်းနှင့်မိုဃ်းတိမ်မှ Out-of-နေ့စွဲဖိုင်တွေရွှေ့နိုင်ပါတယ်။ သင်တို့သည်လည်းရက်ပေါင်း 30 အထိမည်သည့်ဖိုင်တွဲမလိုချင်တဲ့အပြောင်းအလဲသို့မဟုတ်သင့်တစျခုလုံးကို Dropbox ကိုပြန်လှိမ့်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
သို့မဟုတ်လက်ရှိ Plus အားဖောက်သည် Dropbox ကို Professional ကမှ upgrade နိုင်ပါတယ်။3တီဘီ (3,000GB) နဲ့, သင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအားလုံးကိုသင့်ရဲ့ပစ္စည်းပစ္စယ-ကနေအလုပ်စီမံကိန်းများကိုသိုလှောင်ဓာတ်ပုံများနှင့်နှမြောဖို့အာကာသရှိနိုင်ပါသည်။ သင်နှင့်သင့် client များ Dropbox ကိုစွန့်ခွာခြင်းမရှိဘဲအများဆုံးဖိုင်အမျိုးအစားများအပေါ်မှတ်ချက်ပေးရန်နိုင်ပါတယ်။ ထိုအသင်, ရေစာတစ်ခုနှင့်သင်၏အလုပ်ကာကွယ်ဖို့အတွက် shared link ကိုထိန်းချုပ်မှု add, ဒါမှမဟုတ် 180 ရက်သင့်အကောင့်ကိုတက်ပြန်ရစ်နိုင်ပါတယ်။
ငွေပေးချေမှုပြီးစီးမီ, သငျသညျအစီအစဉ်စျေးနှုန်းကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်။ ဤငွေပမာဏသည်သင်၏ Google Play စအကောင့်တရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ပြီးအစီအစဉ်နှင့်တိုင်းပြည်အားဖြင့်ကွဲပြားခြားနားပါလိမ့်မယ်။ app ထဲမှာဝယ်ယူ Dropbox ကို subscriptions ကိုသင့်ရဲ့အစီအစဉ်အပေါ် မူတည်. လစဉ်သို့မဟုတ်နှစ်စဉ်သက်တမ်းတိုး။ သင်၏စာရင်းပေးသွင်းမှုကိုသက်တမ်းတိုးမည်မတိုင်မီ Auto-သက်တမ်းတိုးရှောင်ရှားရန်, ကအနည်းဆုံး 24 နာရီအတွက်ကို turn off ။ သင်သည်သင်၏ Google Account ကို setting များကို Play ကနေ Auto-သက်တမ်းတိုးအချိန်မရွေးအချိန်ကို turn off နိုင်ပါတယ်။
ငါတို့သည်သင်တို့ထံမှနားထောငျခစျြတင့်! က Dropbox အသိုင်းအဝိုင်း join: https:www.dropboxforum.com
Service ၏စည်းမျဉ်းများ: https:www.dropbox.comterms
Dropbox အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Dropbox အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Dropbox အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Dropbox အား အခ်က္ျပပါ
premiumapp စတိုး 2.19k 2.94M
Dropbox ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
ေနာက္ထပ္ မီဒီယာ & ဗြီဒီယို အက္ပ္မ်ားကို ၾကည့္မည္
APK အေၾကာင္း Dropbox အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 158.2.2
ထုတ်လုပ်သူ Dropbox, Inc.
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://www.dropbox.com/privacy?mobile=1
File Size: 60.74MB
Release date: 2019-09-12 17:16:58
လက်မှတ် SHA1: FE:F9:15:39:8E:CE:93:1D:5C:5D:70:C7:F0:80:98:2F:07:FA:82:97
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Tom Meyer
အဖွဲ့အစည်း (O): Dropbox
Dropbox APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ